मंगल ग्रहमा पहिलो पटक मानव पाइला पर्दै « Radio Narayani
मंगल ग्रहमा पहिलो पटक मानव पाइला पर्दै
२९ जेष्ठ २०७९, आइतबार ००:०० १२ : ५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं,२९ जेठ । अमेरिकी अन्तरिक्ष अनिसन्धान संस्था नासाले मंगल ग्रहमा मानिसलाई एक महिना वा सोभन्दा बढी समयसम्म राख्ने तयारी गरिरहेको छ ताकि अन्तरिक्ष यात्रीहरूले रातो ग्रहको सतहमा समय बिताउन र अनुसन्धान गर्न सकून् र नयाँ जानकारी पेश गर्न सकुन् । तर त्यो भन्दा पहिले धेरै कुराहरु गर्न आवश्यक छ।वैज्ञानिकहरू र इन्जिनियरहरू बीचको छलफलको ठूलो मुद्दा यो हो कि अन्तरिक्ष यात्रीहरूले एक महिना के गर्नेछन् ? मंगल ग्रहमा गएका अन्वेषकहरूले त्यहाँ झण्डा राख्छन् ?
जिउँदो रहन कस्तो प्रयास गर्नुपर्छ ? अवतरण कहाँ हुनेछ ? धेरै प्रकारका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न बाँकी छ तर मंगल ग्रहमा निर्माण हुने बेसको नाम भने तय भएको छ ।मंगल ग्रहमा निर्माण हुने पहिलो मानव बेसको नाम मार्स बेस १०१ हो। गत महिना नासाले बैठक बोलाएको थियो। जसमा मंगल ग्रहमा निर्माण हुने पहिलो बेसमा उपस्थित अन्तरिक्ष यात्रीहरूले के गर्ने ?
मानव मिशन मंगल ग्रहमा कसरी जान्छ? सम्पूर्ण मिशनको अवधिमा कस्ता प्रकारका अपरेशनहरू हुनेछन्? कस्तो प्रकारको वैज्ञानिक परीक्षण गरिनेछ? भन्ने निर्णय गरिएको थियो।बैठकमा एउटा रमाइलो कुरा बाहिर आएको छ कि अन्तरिक्ष यात्री पठाउनुअघि रोबोटिक मिसन पठाइनेछ । त्यसैले मंगल ग्रहमा कस्तो उपकरण चाहिन्छ, त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि त्यस्ता उपकरणहरू पठाइनेछ। जुन रातो ग्रहमा मानिसलाई जीवित राख्न आवश्यक छ। किनभने अन्तरिक्ष यात्रीहरूले धेरैजसो समय मंगल ग्रहमा काम गर्नुपर्नेछ, ताकि तिनीहरू जीवित र स्वस्थ रहन सकून्।ह्युस्टनमा रहेको नासाको जोन्सन स्पेस सेन्टरको एस्ट्रोमेटेरियल रिसर्च एण्ड एक्सप्लोरेसन साइन्स डिभिजनका ग्रह वैज्ञानिक पल नाइल्सले मंगल ग्रहमा ३० दिनसम्म बस्ने अन्तरिक्ष यात्रीहरूले थप आरामसँग काम गर्नुपर्ने बताए।
उनीहरूको कार्यतालिका निकै कडा हुनेछ ताकि हामी सकेसम्म धेरै जानकारी सङ्कलन गर्न सक्छौं। पहिलो मिसन पछि, मंगल ग्रहमा धेरै प्रकारका अनुसन्धानहरू हुनेछन्। यससँगै मानव बस्ती स्थापनामा सहयोग पुग्नेछ ।
पूर्वी युक्रेनको सेभेरोदोनेत्स्क शहरमा फसेका हजारौं सर्वसाधारण उद्धारमा कठिनाई
काठमाडौं,२असार । रुसी आक्रमणको चपेटामा परेको पूर्वी युक्रेनको सेभेरोदोनेत्स्क शहरमा हजारौं सर्वसाधारण फसेको र उनीहरूको उद्धारमा कठिनाई देखिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले
काठमाडौं,३० जेठ । महाराष्ट्रको पुणे पुलिसले पञ्जाबी गायक सिद्धु मूसेवाला हत्या प्रकरणका शूटर सन्तोष जाधवलाई पक्राउ गरेको छ। यससँगै हत्यामा
अफ्रिकी संघका प्रमुख र राष्ट्रपति पुटिन बीच शुक्रबार रुसमा वार्ता हुने
डाकार, १९ जेठ, । अफ्रिकी संघका प्रमुख एवं सेनेगलका राष्ट्रपति म्याकी सालले शुक्रबार दक्षिणपश्चिम रुसी शहर सोचीमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग
इरानमा भवन भत्कँदा २९ जनाको मृत्यु, ३८ हराए
तेहरान, १६ जेठ । इरानको राजधानी तेहरानमा एक भवन भत्कँँदा त्यसमा परेर कम्तीमा पनि २९ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ